Amazon Is Primed For Online Domination –
Waxaan ka hadalnaa Dibida dukaamada shiinaha, laakiin ka waran dibida ku dhex yaacay dariiqyada dhamaan xaafadaha laga dukaameysto, ama xaafadaha kale? Subaxan, Amazon waxay daaha ka qaaday muuqaal cusub oo tijaabin doona inta dibi uu ku jiri karo khadka – wixii ka baxsan dukaankeeda Shiinaha, si loo hadlo.
Prime – nidaamkeeda ku salaysan xubinimada oo bixisa dookh raritaan bilaash ah oo degdeg ah tiro badeecooyin ah oo lagu iibiyo Amazon, oo ay weheliso tiro faa’iidooyin kale ah sida fiidyaha iyo adeegyada muusigga ee Amazon, oo ay isticmaalaan in ka badan 200 milyan oo macaamiil ah – ayaa hadda si rasmi ah uga soo baxaya dibadda. derbiyada Amazon lafteeda. Ku iibso Primesida adeegga si rasmi ah loogu yeero, waxay arki doonaan xubnaha Prime si ay u kordhiyaan faa’iidooyinka Prime – gaar ahaan si degdeg ah oo bilaash ah, soo celinta bilaashka ah, iyo khibrad hubin la’aan ah – si ay uga qaybqaataan ganacsatada qolo saddexaad leh goobaha iyo apps.
Ma jiro wax dammaanad ah oo ah in tani ay noqon doonto hit weyn Amazon. Alexa aad ayey ugu weyn tahay shirkadda, Prime on Amazon lafteeda ayaa sidoo kale ahaa. Laakin ha iloobin Telefoonka Dab-damiska, ama Amazon ee u soo baxitaanka makhaayadda, ama mashaariicda kale ee la dilay sannadihii la soo dhaafay.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira tiro aad u badan oo suurtagal ah halkan shirkadda, markaa waxaa habboon in la qeexo waxa socda, qaar ka mid ah macnaha ka dambeeya bilaabista (iyo waxa ay taasi ka dhigan tahay), iyo waxa ay siinayso Amazon in ay haysato. Horay uma lahayn, iyo sababta ay taasi muhiim u tahay.
1 Marka hore, aasaaska
2 Aayar u dhaqaaq, wax jebi
3 Prime waa wakiilka isbadalka ee Amazon
4 Aayar u dhaqaaq, wax jebi
5 Xogtu waa saliidda Amazon
Marka hore, aasaaska
Iibka Prime waxa uu ka bilaabayaa baayacmushtar horay u isticmaalayay Fulfillment By Amazon (FBA) – kaas oo, sida Amazon Pay, waa sifa Amazon oo horeba looga heli jiray meel ka baxsan Amazon.com oo ay ganacsatadu u adeegsadaan agabka dhoofinta iyo saadka.
Amazon waxa ay sheegtay in ay u bixi doonto tafaariiqlayaashan inta ka harsan sanadkan, iyo marka 2022 uu sii socdo waxaa sidoo kale la kordhin doonaa kuwa aan horay u isticmaalin FBA ama wax ku iibinaya Amazon qaab martiqaad ah.
Adeegga oo dhan waxaa lagu maamulaa fikrad la mid ah AWS, iyadoo lagu saleynayo qiimaha SaaS ee daboolaya khidmadda adeegga, khidmadda socodsiinta bixinta, khidmadda buuxinta iyo khidmadda kaydinta – dhammaan waxaa la xisaabiyaa halbeeg kasta. “Ganacsatada waxay ku bixiyaan kaliya waxay isticmaalaan,” Amazon ayaa qoray. “Ganacsatada waxay balaadhin karaan doorashada ama burin karaan wakhti kasta.”
Amazon waxay tan u ciyaareysaa si ku habboonaansho badan iyo shuruud kale oo loogu talagalay macaamiisha Prime.
“Waxaan mar walba higsaneynaa inaan dhaafno rajada xubnaha Prime anagoo bixinayna xulasho badan, heshiisyo gaar ah, waxyaabo tayo leh, iyo astaamo ku habboon,” ayuu yiri Jamil Ghani, VP ee Amazon Prime, hadal qasacadaysan oo ku saabsan ku dhawaaqista rasmiga ah ee Amazon. “Iyadoo la hirgelinayo Iibka Prime, waxaan ku fidineynaa halkaas oo xubnuhu ay ku raaxaysan karaan faa’iidooyinka wax iibsiga ee la aamini karo oo ku habboon wixii ka baxsan Amazon, iyaga oo ku daraya xitaa qiimo badan xubinnimadooda. Xubnuhu waxay yeelan doonaan dabacsanaan ay si toos ah uga soo dukaamaystaan ​​baayacmushtarka, dhammaan inta ay ku raaxaysanayaan soonka, gaarsiinta bilaashka ah, hubin la’aanta, iyo soo celinta fudud ee ay ogaadeen oo ay ka jecel yihiin Amazon. “
Waxa kale oo ay ku tusinaysaa iyada oo qayb ka ah istaraatiijiyadeeda lagu dhisayo qalabka B2B, ee loogu talagalay ganacsatada wax ku iibinaysa khadka.
“In ka badan 20 sano, waxaan awood siinnay ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah fursado ay ku koraan,” ayuu yiri Peter Larsen, ku xigeenka Amazon ee Buy with Prime, isla ogeysiiskaas. “U oggolaanshaha ganacsatada inay ku bixiyaan faa’iidooyinka wax iibsiga ee Prime-ka ee dukaamada tooska ah ee tooska ah ee macaamiisha ayaa ah tillaabada xigta ee xiisaha leh ee hadafkeena ah inaan ka caawino ganacsatada nooc kasta ah inay koraan ganacsigooda – ha noqoto Amazon ama wixii ka dambeeya. Iyada oo dukaamaysanayaashu ay si toos ah uga iibsanayaan dukaamada online-ka ah ee ganacsatada, Buy with Prime waxay u oggolaan doontaa ganacsatadu inay dhistaan ​​cilaaqaadka macaamiisha iyo daacadnimada sumadda iyagoo bixinaya faa’iidooyinka wadista baabuurta sida degdegga ah, dhoofinta bilaashka ah.
Aayar u dhaqaaq, wax jebi
Si la mid ah duubista kale ee aadka u gaabis ah ee aan ku aragnay Amazon, fidinta Prime ee ka baxsan beerta darbiga ah ee Amazon waxay ku jirtay shaqada sanado – in ka badan seddex, dhab ahaantii.
Dabayaaqadii Maarso 2019 – markii shirkaddu ay soo bandhigtay iskaashi ay la leedahay WorldPay taas oo u saamaxday ganacsatada ka baxsan Amazon inay bilaabaan inay aqbalaan Amazon Pay sida ikhtiyaarka lacag bixinta oo ay weheliyaan kuwa kale sida kaararka deynta, PayPal, Apple Pay iyo Google Pay – VP ee Amazon Pay at the Waqti, Patrick Gauthier, aad buu ii jeclaa markii aan weyddiiyey waxa ku saabsan hammigiisa ah inuu kordhiyo Prime si la mid ah.
Taa baddalkeeda, wuxuu ii tilmaamay tijaabo yar oo ay la shaqeyneysay dukaamada tafaariiqda ee All Saints, kaas oo siinaya rarida ra’iisul wasaaraha macaamiisha haddii ay horeba u ahaayeen macaamiisha Prime.
“Waxay ahayd mid aad loogu guulaystay marka la eego beddelka macaamiisha iyo kor u qaadista, iyo in la qabto macaamiisha cusub,” ayuu yidhi. Waxa kale oo uu xusay in ay samaysay imtixaan ka duwan intii lagu jiray Maalinta Ra’iisul-wasaaraha ee 2018, iyada oo ku dhejinaysa xidhiidhada Prime ee ganacsatada dhinac saddexaad ah (laakiin isku xidhka dukaamanka dib u soo celinta ganacsatada ‘Amazon-based) si ay u fahmaan fursadda suurtagalka ah ee ay halkan ku heli karto. “Haa, waxaan xiiso ka helnay ganacsatada haddii iyo markaan go’aansanno inaan sii wadno Prime,” ayuu raaciyay. (Gauthier tan iyo markii uu ka tagay Amazon si uu u maamulo Convera, Western Union’s Business Solutions ayaa soo baxay.)
Prime waa wakiilka isbadalka ee Amazon
Amazon waa mid aan caddayn marka ay timaado lambarada isticmaalaha iyo dakhliga alaabta gaarka ah. Tirooyinka rasmiga ah ee ugu dambeeyay waxay ahaayeen Abriil 2021, markii aasaasaha (hadda) gudoomiyaha fulinta Jeff Bezos uu sheegay inay 200 milyan oo xubnood. (Waxay hadda leedahay “in ka badan 200 milyan.”)
Amazon Prime doodan waxay ahayd wakiilka aasaasiga ah ee isbeddelka adduunka Amazon: ugu horreyntii, waxay ahayd madaxa shirkadda (prime, xitaa) habka loo dhiso daacadnimada macaamiisha dhexdooda, kuwaas oo helay fursadaha dhoofinta bilaashka ah iyo degdegga ah inay noqdaan lever weyn. si loo yareeyo caqabadaha wax iibsiga online. Soo jiidashada dhoofinta degdega ah iyo “bilaashnimada” waxay ahayd mid xoogan oo ku filan in xubnaha Prime ay marka hore u jeestaan ​​Prime ka hor inta aysan ka fiirsan (inay iibsadaan) alaabada kale marka ay timaado baarista iyo iibsashada, dariiqa ay fududeeyeen qaabka raadinta Amazon si ay u raadiyaan kaliya Prime. – alaabooyinka u qalma.
Taasi waxa la tusay inay tahay mid awood ku filan oo ay dadku xitaa diyaar u yihiin inay ka door bidaan badeecada Prime-based ka ka qiimo jaban, laakiin waxay qaadan kartaa waqti dheer in la helo, ama in qiimaha dhoofinta si cad loogu qeexo qiimaha guud – badiyaa isku darka labada.
Amazon sidoo kale waxay isticmaashay Prime si ay u soo bandhigto gabi ahaanba qaybaha alaabada kala duwan, sidoo kale, laga bilaabo dukaamada ilaa adeegyada warbaahinta la daawado. Guud ahaan Amazon ayaa sheegaysa in Prime uu daboolo kumanaan filim iyo bandhigyo Fiidiyowga Fiidiyowga; 2 milyan oo heeso ah, kumanaan saldhigyo iyo liis-ciyaareed, iyo kumanaan podcasts oo ku yaal Amazon Music; ciyaaraha bilaashka ah ee ciyaaraha Prime; in ka badan 3,000 oo buug iyo joornaallo ku saabsan Akhriska Koowaad; Kaydinta sawir aan xadidnayn oo leh Sawirrada Amazon; keenista raashinka iyo ka soo qaadista Amazon Fresh iyo Whole Food Market; isla-maalin iyo xulashooyin kale oo degdeg ah oo lagu gaarsiinayo 15 milyan oo shay gudaha Mareykanka oo keliya; Farmashiyaha Amazon iyo gelitaanka dawooyinka; iyo qaar kaloo badan.
Iyadoo la tixgelinayo sida isbeddelka Ra’iisul-wasaaraha u noqday Amazon lafteeda, waa cadaalad in la yaabo haddii Amazon laga yaabo inay isku dayaan inay ku dhaqmaan qaar ka mid ah istaraatiijiyadaas meel fog, sidoo kale. Taasi waa in la yiraahdo, haddii ay ka bilaabato rootiga iyo subagga ganacsigeeda hadda – Suuqa Suuqa, iyo noocyada alaabooyinka iibiyeyaasha dhinac saddexaad waxay horeyba u bixiyaan Amazon lafteeda – miyay sii kordhineysaa soo socota bixinta Prime si loogu biiro wargeysyada iyo wargeysyada, ama noocyada kale ee warbaahinta, ama dukaamada cuntada ee internetka?
Mid ka mid ah arrimaha muhiimka ah ee Amazon ee dad badan ayaa ahaa in noocyada saddexaad aysan aad u jeclayn inay ku haboonaadaan qaabka Amazon marka ay timaado soo bandhigida alaabteeda. Amazon waxay isku dayday in ay sameyso dadaal sanado badan si ay wax uga qabato tan – tusaale ahaan iskaashigan lala yeesho Adobe si uu u caawiyo noocyada D2C ee isticmaalaya Amazon buuxinta si ay u habeeyaan dukaamadahooda – laakiin guud ahaan xitaa marka ganacsatadu leeyahay dukaamo u muuqda “ka duwan” inta kale ee Amazon. Amazon lafteeda, ka sii qoto dheer oo ka hooseeya bogga hore waxay soo saartaa isla habka wabiga-cutter-cutter-ka ee Amazon ay ku jaangooyeen dhammaan Amazon.com.
Dabeecaddaas ayaa ganacsiyo badan u horseeday sida Shopify, Commercetools iyo kuwo kale oo badan oo siinaya xalal ganacsi “madax-la’aan” ganacsatada si ay u dhistaan ​​oo ay u maamulaan dukaamada oo leh wax yar ama wax badan, iyo isku dhafka xalal badan oo dhinac saddexaad ah oo ay ku jiraan kuwa loogu talagalay saadka iyo buuxinta, sida ay diyaar u yihiin inay sameeyaan – ciidan badan oo ka mid ah shirkadaha saddexaad ee bixiya tignoolajiyada e-ganacsiga e-commerce oo ku urursan magaca siinta tafaariiqda si ay uga gudbaan Amazon.
Hadda, Amazon si fiican ayey ula ciyaareysaa aaladaha sida BigCommerce. Ku-xoojinta goobaha shuruudo gaar ah ayaa meesha ka saaraysa waxaas oo dhan, waxayna noqon kartaa ikhtiyaar awood leh oo loogu talagalay ganacsiyo ballaaran oo ka baxsan ganacsiga e-commerce, kuwaas oo si gaar ah diiradda u saaraya maareynta nuxurka.
Waxaa jira tusaalooyin badan oo ku saabsan sida Amazon aysan u ahayn sawirka ugu dhaqsaha badan marka ay timaado soo saarista waxyaabo cusub. Waxay qaadatay sanado Amazon inay ku darto dalal badan Kindle oo ka baxsan suuqa guriga ee Mareykanka (ama runtii inaad wax badan ku darto: ka raadi TC ama Google ereyada “kindle” iyo “ugu dambeyntii” si aad u aragto waxaan ula jeedo) . Waxaa mudan in la is weydiiyo in hababkaas la soo saaray ay gacan ka geysteen ama hor istaageen kobaca buugaagta elektaroonigga ah, mise labaduba waxay ahaayeen oo si fudud midba midka kale u kansalay.
Kindle-ku wuxuu mudan yahay in la eego marka la tixgelinayo sida Amazon ay u dhistay alaabada ku fidisa xuduudo cusub, sida Prime uu samayn lahaa. Guusha akhristaha e-akhristaha ee guriga ku koray waa mid aan muran lahayn: inkastoo Amazon ay tahay mid caan ah marka laga hadlayo tirada iibka dhabta ah, kuwa kale waxay qiyaasayaan in qaybteeda e-akhristayaasha ay tahay ku dhawaad ​​68%.
Dhanka kale, buugaagta elektaroonigga ah laftoodu wali waa suuq yar marka loo eego suuqa akhriska guud ahaan, oo leh Pew Research (la qiray in la isticmaalayo xogta 2019) isagoo xusay in kaliya 7% jawaab bixiyaasha ay sheegeen inay akhriyaan kaliya buugaag elektarooni ah, marka la barbar dhigo 37% iyagoo leh kaliya akhrinta buugaagta daabacan (28% waxay akhriyaan isku darka). Si kale haddii loo dhigo, isbeddelka caadooyinka guud ayaa laga yaabaa ama laga yaabo inay dhacaan, waxayna noqon doontaa arrin si tartiib ah u gubanaysa hal dhinac ama mid kale. Laakiin inta lagu guda jiro, Amazon lafteedu waxay sameeyaan dil suuqa in ay abuurtay. Taasi waxay si fiican u noqon kartaa qaab ku soo noqnoqda Buy with Prime.
Xogtu waa saliidda Amazon
Ugu dambeyntii, laakiin ugu yaraan, waxaa jira xog xiiso leh oo loogu talagalay Amazon, taas oo u socota wadnaha sida weyn ee ganacsiga e-commerce uu u kobcinayo kobacdiisa.
Amazon waxay siinaysaa baayacmushtarta xakamaynta dhinacyada habka ganacsiga e-commerce ee ka bixi lahaa gacmahooda haddii ay ku iibiyaan Amazon lafteeda. Waxay xakameyn karaan shakhsiyeynta dadka wax iibsanaya, algoorithms ka dambeeya waxa dadka kala duwan la bixiyo iyo sida alaabada loo qiimeeyo, iyo interface interface iyo khibrad ballaaran. Laakiin haddii aad si buuxda u maamusho xogtooda, Amazon hadda way arki doontaa, sidoo kale.
Waa habaynta macluumaadka ku saabsan macaamiisheeda aasaasiga ah, faahfaahinta muhiimka ah ee ku saabsan caadooyinkooda wax iibsiga, habdhaqanka iyo danaha dhammaan noocyada kale ee boggaga ee aan loogu talagelin ama maamulin Amazon – dhammaan macluumaadka ay iyadu isticmaali karto si ay u horumariso una qaabayso waxa ay ku iibinayso Amazon. com.
Taas way ka gudubtaa, in kastoo. Amazon waxay noqotay ciyaaryahan weyn oo xayaysiis online ah, aag sidoo kale laga yaabo inay ka faa’iidaystaan ​​​​datasets-ka qani ah ee ku saabsan baarista iyo caadooyinka wax iibsiga, taas oo sababta oo ah tani waxay khusaysaa macaamiisha aasaasiga ah iyo socodsiinta amarada asaasiga ah, waxay noqon doontaa xogta xisbiga kowaad ee shirkadda.
Waxa kale oo ay siinaysaa Amazon dildilaac xiiso leh door xitaa ka weyn ee caalamka online, in maamulka aqoonsiga.
Shirkadaha sida Facebook (Meta), Apple iyo Google ayaa dhamaantood sameeyay riwaayado xiiso leh oo lagu xakameynayo “galitaanka” ee barnaamijyada iyo goobaha, abuurista garaafyada bulshada iyo garaafyada isticmaalaha ee jardiinooyin kala duwan Bixinta hab lagu maareeyo isticmaalayaasha iyo profile-yada abka iyo goobaha gaarka ah (ka faa’iidaysiga abkaas iyo daabacayaasha goobta).
Tani waxay siinaysaa fikradda ah maroojin cusub, waxayna tilmaamaysaa sida Amazon runtii u xakameyn karto dhammaan. Haddii Facebook ay diiradda saarto garaafka bulshada, iyo shirkadaha sida Apple ama Google ay sameeyeen riwaayad si ay u dhisaan garaafka aqoonsiga, Amazon waxay awood u leedahay inay dhisto garaafka macaamiisha, sawir guud oo weyn oo ku saabsan sida internetku u socdo oo ku saleysan waxqabadka iibsashada.